Date My Pet » Lehibe ny zava-miafina Kiss
Nanoroka Mahafinaritra ary rehefa nanao izay mahitsy, Nahatonga dia manidina ary hamela ny mpiara-miasa tsy nahateny. Ahoana anefa no hitondra ny MIFANOROKA any amin'ny ambaratonga manaraka? Eto ambany, efa tsy misarom-boaly ny zava-miafina ny oroka lehibe.
Miafina #1: Tease
Maka fotoana mba hananihany alohan'ny molotra locking manampy mba hanatanjahana ny niandry. Na ny mifampitantana, nisangy, na namafa lamosiny, fifandraisana ara-batana izany eo anatrehan'ny tena oroka dia zava-miafina izay hanampy mainka ny nizara miaraka amin'ny faniriana lalina ny fifandraisana.
Miafina #2: Mitonia
Nanoroka, na dia efa nanoroka ho injato, Mety ho tena kozatra tsaina anao koa anefa. Ny fanalahidy dia ny miala sasatra. Tsarovy ny mifoka rivotra lalina, hanamaivana ny sainao, ary mino ny tenanao.
Miafina #3: Molotra
Manao zavatra amin'ny molotra tsy nanoroka hafa. Mbola minono na ny mpiara-miasa moramora nibbling molotra dia ataovy azo antoka fa hitondra azy ireo amin'ny firaisana ara-nofo adala olana. Manondro molotra iray hafa-dia ny mifantoka teknika mihazakazaka ny tendron'ny ny lelanao ho afa-maina ny molony. Raha ny MIFANOROKA no haka, miovaova ny tsindry sy ny hafainganam-pandehan'ny ny fanorohan'ny fientanam-po dia manampy ny mamorona ho toy ny mpiara-miasa dia tsy mahafantatra izay ho avy manaraka.
Miafina #4: Manan-tsofina, Nose, Eyes, ary ny tendany
Raha nanoroka dia mifantoka manodidina ny molotra matetika fa tsy ny toerana ihany no tokony hifantoka amin'ny. Nanoroka ny mpiara-miasa sofina, hanamarina, orona, ary ny hodi-maso manampy mba hiverina rehetra tsotra pitiavana oroka ho sambatra. Raha te-handray ny azy ny notch, playfully miezaka manaikitra ny earlobe sy ny vozony. Ny hanihany ireo toerana manokana mamorona vaovao sy ny fihetseham-po sensations izay hanampy ny filan'ny nofo sy ny hamafin'ny ny ho ela oroka.
Miafina #5: Fihetseham-po
Raha ny zava-miafina ambony dia afaka manampy ny hampiala azy rehetra ho lehibe kisser, ny lehibe indrindra lainga rehetra, zava-miafina ny amin'ny toe-pihetseham-po sy ny fifandraisana any amin'ilay namanao. Mba jereo ny afomanga rehefa nanoroka, ny fanahinareo koa niteny amin'izy samy izy. Amin'ny alalan'ny fizarana tantara akaiky sy ny fahatsiarovana, tahotra sy fatra-paniry laza, ary mamela ny fihetseham-po tena mampiseho ireo fomba rehetra ny hitondra ny fifandraisana amin'ny sehatra lalina kokoa. Na dia vaovao, pihetseham-po dia hahatonga anao fanjakana mora, izany no mety iray izay ho mendrika izany.
Nanoroka no fomba tena tsara mampiseho ny olona iray manokana izy ireo fa tena dikan 'ny hoe anao. Raha ireo zava-miafina, akaiky izany dia afaka manova zavatra ny fifandraisanareo ho izany fifandraisana lalina irinao.